Kahadalida cudurada galmada lagu kala qaado inkasta oo dhaleeceyn - Amjambo Africa
Dhaqanka, bulshada, dhaqaalaha, iyo qodobada qaab-dhismeedka saameyn ku yeeshaan cidda ka dhigta cudurada galmada la isugu gudbiyo (STIs), oo marin u leh baaritaanka iyo daaweynta STI, iyo cidda wax ku barata galmada aaminka ah. Tani waa run laxiriirta cudurada STI ee ku taal Maine, oo dhan U.S., iyo Caalamka oo dhan. Maalin kasta, 1 ka mid ah 5 qof 5 qof ee ku jira Mareykanka ayaa lahaan doona infakshan galmada lagu kala qaado (STI).
Tusaalooyinka CGF waa kalamiidiya, jabtada, jabtada, fayraska papilloma, waraabowga, tricomominiasis, cagaarshowga B iyo C, iyo HIV. Dadku waxay ku heli karaan galmo siilka, afka, ama dabada – xitaa hal lammaane oo keliya. Macno malahan in lammaaneyaasha galmada ay yihiin lab, dhedig, ama labadaba. Dadka heerarka nololeed ee dhan waxay heli karaan STIs – si kastaba ha noqotee, ka yar lammaanaha galmada, ayaa hoos udhacaya fursadda qabashada CGF.
Dhamaan STIs ma dhaliso astaamo la arki karo, sidaa darteed bixiyeyaasha daryeelka caafimaadku waa inay si joogto ah bukaannada u baarayaan STIs oo qayb ka ah nidaamka joogtada ah, daryeelka caafimaadka aasaasiga ah. Bukaanka daacad u ah bixiyaha xanaanada caafimaadka ee ku saabsan noocyada galmada ee ay leeyihiin iyo inta lammaane ee ay u badan tahay inay sida badan u helaan baaritaanada saxda ah iyo daaweynta.
Dadka waa in laga baaraa STIs markasta oo ay leeyihiin lammaane cusub oo galmo ama lammaanahooda uu leeyahay galmo cusub oo galmo ah. Baadhitaanka joogtada ah iyo daaweynta degdegga ah waxay ka hortagtaa cawaaqibta caafimaad ee muddada-dheer ee STIs aan la daaweyn, kaas oo kordhin kara halista cudurka miskaha ee HIV, dhibaatooyin xanuunsan, dhibaatooyinka ilmaha dhashay, iyo xitaa dhimashada ilmaha dhashay.
Maine waxay bixisaa daaweyn la-dagaallanka lammaane, ku habboon, iyo daaweynta qarsoodiga ah ee lamaanaha galmada haddii qof kale uu ku baaro cudurka jabtada iyo Chlamydia. In EPT, bixiyaha wuxuu siiyaa daawada bukaanka ee lammaanahooda si aysan u baahnayn inay u tagaan dhakhtarka si ay u daawadaan.
Nasiib darrose, hadalka si furan oo daacad ah oo ku saabsan caafimaadka galmada iyo STIs aad ayey ugu adag tahay dadka intiisa badan, tanina xitaa waa run in kuwa ka hadla turjubaan ama kala duwanaanshaha dhaqanka. Sababtaas awgeed, qorshaynta qoyska Maine, mid ka mid ah bixiyeyaasha ugu waaweyn ee ugu weyn ee Maine Daryeelka Caafimaadka STI, ee la-hawlgalayaasha lala yeelanayo ururada bulshada sida joogitaankeeda iyo joogitaanka weyn ee Portland. Ujeeddada iskaashiga ayaa ah in la bixiyo waxbarasho, marin u helid, iyo daryeel caafimaad iyo taranka taranka Qaxootiga qaxootiga ee Maine iyo soogalootiga.
Qorshaynta qoyska ee Maine waxay heshay $ 160,000 oo lacageed oo lacageed ah si ay u bixiso mushaaraadka shaqaalaha cusub ee Caafimaadka Bulshada (Chush) Daryeel-hoosaadyo HIV, ku samee kooxaha xallinta kooxaha daneeyayaasha bulshada, oo gaarsiiya tababar bixiyeyaal dheeraad ah. Chrows waxay bartaan sida bulshooyinka kaladuwan uga hadlaan STIs oo ay ka shaqeeyaan sidii loo dhisi lahaa aaminaadda waxayna ka jajabiyaan taboos dhaqameed iyo aamusnaan mawduuca STIs. Baadhitaanka caadiga ah iyo waxbarashada ku saabsan astaamaha CGF waxaa loo arkaa qayb muhiim ah oo ka mid ah wacyigelinta.
Isbeddellada ku jira STIs kama duwana isbeddelada qaranka ee la xiriira sida jinsiyadaha iyo qowmiyadaha kaladuwan ay u socdaan CGF. Kooxo badan, carqalado dhaqameed iyo luqadeed iyo luqadeed ayaa ku qasbaya arrimo dhaqaale waxayna horseedaan qiimayaasha baarista ee hooseeya iyo daaweyn daahsoon. Qaranka 2019, heerarka Std ee loogu talagalay dadka reer Mareykan ee Afrikaanka ah ama dadka madowga ah waxay ahaayeen 5-8 jeer oo ah dadka cadaanka ah ee Hispanic; 3-5 jeer in dadka cadaanka ah ee loo yaqaan ‘Hindisada’ Hindida Mareykanka ee Mareykanka ama Dhalad Alaska iyo Dhaladka u dhashay Hawaiian ama Jasiiradaha kale ee Baasifiga.
Xarunta Maine ee Xakamaynta Cudurada (CDC) Barnaamijka ka-hortagga STD wuxuu ka shaqeeyaa gobolka oo dhan si uu u qaybiyo lacagaha federaaliga ee loogu talagalay baaritaanka, daaweynta, iyo waxbarista ee ku saabsan CGF. Imtixaan bilaash ah oo qarsoodi ah ayaa laga heli karaa goobo badan, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah xarumaha caafimaadka ee ku saleysan iskuulka sida kuwa ku nool Portland iyo Lewiston. Intaas waxaa sii dheer, websaydhka ‘CDC’ waxaa liis garaya xarumaha imtixaanka, in kastoo goobaha oo dhami ay bilaash yihiin, oo dhammaratana ma bixiyaan baaritaanka HIV.
Barida carruurta Sida loo yeesho galmo nabdoon waa qayb muhiim ah oo ka mid ah yareynta cudurada STI – oo ka badan nus ka mid ah STIs-ka cusub ee ku dhaca da’da 15-24. Qoysas badan oo soogalooti ah, oo abtirsiinyo yar yar oo ku koraya dhaqan ka soo baxa Dhaqanka U.S, ka hadalka galmada iyo STIs ayaa soo bandhigaya caqabado waaweyn. Qoysaska qaarkood waxay ka baqayaan in ka hadalka ku saabsan galmada ay ku dhiiri gelin doonto goyn-beel.
Murreal Nabi, oo ah gabadha muslimka ah, oo ah gabadha reer Pakistan iyo waalidiinta Afgaaniani, iyo sidoo kale chow qorshaynta qoyska ee Maine ee Lewiston-Auburn, waxay leedahay qibrad shaqsiyadeed oo la xidhiidha kahadalka ku saabsan ka hadalka ka hadalka galmada. Xaqiiqdii, waxay dooratay jidkeedii shaqo sababta oo ah waxay aaminsan tahay ‘waxaa jira wax aad u xun. Cidna looma xisaabin doono inuu caafimaad qabo, xitaa marka ay timaado galmada … [laakiin] xitaa maanta, shaqada aan haysto, hooyaday iyo waligey ma yeelan doono hadalka galmada! \_” Waxay tidhi.
Fowes Musse, hooyo muslim ah oo ka kooban shan US.-umushay, iyo agaasimaha fulinta ee is-dhexgalka bulshada ee Maine-Auburn-Auburn-Auburn, waxay ku tilmaamtaa \_”caabbinta cabsi-ku-saleysan\_” waxay u horseedaa qoysas badan inay ka baxaan Waxbarashada galmada ku saleysan dugsiga.
Marka, Musse wuxuu siiyaa aqoon-isweydaarsiyo toddobaadle ah, haweenka kaliya—–ka dib-u-habeyn waxbarasho 2-aad, \_”oo ku lug leh waxbaridda carruurta iyo waalidiinta labadaba. Aqoonsigeeda, waxay \_”u egtahay\_” hooyooyinka \_”si gooni gooni ah – wax looga baro CGF, Sinnaanta Galmada, Caafimaadka Gabdhaha, Caafimaadka Gabdhaha (FGM), iyo Cudurrada Opioid. Mar dambe, hooyooyinka iyo gabdhaha ayaa wada kulma si ay u yeeshaan \_”daacadnimo, ula kac ah, iyo dhaqan-dhaqameed\_” oo ku saabsan mowduucyada dhaqan ahaan taboo. Musse ayaa soo sheegay.
Mariesa Weil, Madaxweyne kuxigeenka Qorsheynta Qoyska ee Maine Horumarinta Bulshada iyo sida ugu badan ee barayaasha gobolka – waxay sheegtay inay waalidiinta oo dhami kaliya aysan ahayn galmada, laakiin sidoo kale ku saabsan ogolaanshaha, xuduudaha, iyo istiraatiijiyadaha wada xiriirka ayaa loo baahan yahay si nabad gelyo leh, caafimaad qaba. Qaliinka dhaqameed sida Nabi waxay muhiim u yihiin la xiriirka waalidiinta. Maxaa yeelay iyagu waxay ku hadlayaan luqado badan, waxayna la wadaagaan dhaqamada dhaqanka macaamiishooda, way ku caawin karaan Caqabadaha murugada iyo ka soo baxda cabsida, si khaldan, waxmanka, tabos, ama qalad, ama waxay aaminsan yihiin kahortaga uurka iyo cudurrada ka dhex jira bulshada iyo jaaliyadaha soogalootiga.
Heerarka STIs ayaa sii kordhaya sanadkii ugu dambeeyay ee xogta la heli karo – 2019 – jabiyay rikoorkii sanadkii hore ee sanadkii hore ee ciyaarta sanadkii lixaad ee isku xigta. Gaar ahaan quseeya kororka degdega ah ee tirada xaaladaha waraabowga iyo dhallaanka ku dhasha waro-waraaraha – oo sababi kara waxyeelo weyn iyo geeri.
Caadi ahaan baaritaanka STI-ga, iyo helitaanka qaabab aad si furan ugala hadasho galmada badbaadada leh ee dhaqamada, ayaa muhiim u ah ilaalinta dhammaan bulshooyinka Maine. Iyo safka qaranka-19 faafa faafa carqaladeynta baaritaanka iyo daaweynta STI, xitaa in ka badan dad ka badan kuwii caadiga ahayd ayaa ka dambeeya baaritaanadooda. Maaddaama qaar ka mid ah STIs ee ugu caansan ee aan laheyn astaamo, dhammaan galmada waxay jadwalka u sameeyaan baaritaanno baaritaanno joogto ah si ay naftooda iyo wada-hawlgalayaashooda caafimaad qabaan.
PreviousKarkootne Hibiscus waxay cabtaa cabitaannada Maine
NextCaabuq kasta oo tiibayda (qaaxada) waxay u baahan tahay daaweyn